प्रचण्डलाई बाँस्कोटाको काउण्टर: संविधानले नचिन्ने सर्वदलीय संयन्त्र के सेकाउन चाहियो ? – ताजा समाचार
प्रचण्डलाई बाँस्कोटाको काउण्टर: संविधानले नचिन्ने सर्वदलीय संयन्त्र के सेकाउन चाहियो ?
७० करोड अडियो प्रकरणमा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिन बाध्य बनेका पूर्व सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमक दाहाल प्रचण्डलाई काउण्टर जवाफ दिंदै संविधानले नै नचिन्ने सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा संविधानले नचिन्ने सर्वदलीय संयन्त्र के सेकाउन चाहियो ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बिहिवार एक टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिंदै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताएका थिए ।
दाहालले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारी संरचना मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता औंल्याएका थिए । अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।
पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले भने प्रचण्डलाई काउण्टर दिंदै उक्त प्रस्ताव ठाडै खारेज गर्न माग गरेका हुन् । ‘तलदेखि माथिसम्म नै जननिर्वाचित सरकार छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै कोरोना विरुद्ध अहोरात्र हातेमालो गरिरहेका छन् । स्वास्थकर्मी, सेना, प्रहरी, कर्मचारी र नागरिक युद्धमोर्चामै जुटेका छन् । यस्तो बेला संविधानले नचिन्ने उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र के सेकाउन चाहियो ? ठाडै खारेज गर सरकार, सरकार ।’ उनले लेखेका छन ।
भोट नहालेको भन्दै वडाध्यक्षले दिएनन् राहत :…